Cumar Cabdirashiid oo saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho | Sagal Radio Services
Mr Cumar Cabdirashiid ayaa saakay ka soo dhoofay magaalada Naiorbi oo ay diyaarad qaas ah ka soo qaaday, waxaana uu isla shalay ka soo tagay dalka Mareykanka.
Dad u badnaa siyaasiyiin iyo mas’uuliyiiin soo dhoweyn lahaa Ra’iisul Wasaaraha sii diyaarsan ayaa ku lug go’ay garoonka, kadib markii diyaaradii siday Cumar Cabdirashiid ay saakay aroortii soo degtay, sida ay Jowhar.com u xaqiijiyeen ilo wareed muhiim ah.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Mr Cumar Cabdirashiid oo safar dheer soo galay la dejiyay mid ka mid ah Hotelada Muqdisho, waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ilaa caawa loo magacaabo Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Wararka ayaa intaa ku daraya in marka lagu dhawaaqo Cumar Cabdirashiid maalmo kadib uu magacaabi doono Golihiisa Wasiirada, oo inta badan diyaarsan shaqsiyaadka xilalka loo magacaabayo.
Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke oo aabihiisa Ra’iisal Wasaare iyo Madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya 1964 iyo 1967 dii ayaa isna waxaa uu Ra’iisul Wasaare ka soo noqday dowladdii uu hogaaminayay Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2009-kii, isagoo is casilay bishii september ee sanadkii 2010.
Dadka Muqdisho ayaa aad u hadal hayay in Cumar Cabdirashiid loo magacaabi doono Ra’iisul Wasaare, waxaana aad looga dhur-sugayaa ku dhawaaqidiisa xilka Wasiirka Koowaad.
Cumar Cabdirashiid ayaa ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1960, waxaa uu waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed ku qaatay Muqdisho.